ခမည်းတော်၏နေ့အတွက် 25 စာပိုဒ်တို | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
မိခင်တစ် ဦး တည်းရှိသည့်နည်းတူဖခင်တစ် ဦး တည်းသာရှိသည်။ ဖခင်များနေ့နီးကပ်လာသည်နှင့်အမျှသင့်အတွက်၎င်းသည်သင့်အတွက်အထူးဖြစ်လိုသည့်အရာဖြစ်ပြီး၊ သင့်အားသူနှင့်သင်ရင်းနှီးရန်အလုံအလောက်ရှိပါကသင်သည်ထိုအထူးနေ့၌သူ့ကိုအလွန်ချစ်ခင်တွယ်တာချင်သည်။ ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်၊ စကားလုံးများအားဖြင့်၎င်းသည်ထိုအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် ဤစကားစုများကိုဖခင်များနေ့အတွက်မလွတ်ပါစေနှင့်။
သူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကိုရောက်ဖို့ဒီအမျိုးအစားစကားစုကိုသူ့ထံအပ်နှံရန်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ သူသည်ထိုအထူးစကားများကိုအများပြည်သူသုံးစကားပြောခြင်းမှတစ်ဆင့်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ သငျသညျလညျးသူ့ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးပို့နိုင်ပါတယ် ပုံကောင်းတစ်ပုဒ်နှင့်အတူ။ နောက်စိတ်ကူးတစ်ခုကဖခင်များနေ့အတွက်ကောင်းသောကဒ်ပြားပေါ်တွင်မှတ်စုတစ်ခုရေးရန်ဖြစ်သည်။
ဤစကားစုအမျိုးအစားများကိုသင်၏ဖခင်ထံအပ်နှံရန်သင်အရှက်ရလိမ့်မည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင့်ကိုအကြံဥာဏ်ပေးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခွင့်ပြုပါကထိုအရှက်ကိုဘေးဖယ်ထားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့မှာဘဝတစ်ခုတည်းရှိပြီးသဘာဝနိယာမအရခင်ဗျားရဲ့အဖေကဒီကမ္ဘာဂြိုဟ်ကိုသင့်ရှေ့မှာထားခဲ့လိမ့်မယ် သငျသညျအစဉ်အမြဲသင့်ရဲ့အနားမှာသူ့ကိုရှိသည်မဟုတ်လိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်သူသည်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြောပြရန်၊ သူသည်သင်၏ဘ ၀ တွင်၎င်း၊ သူလုပ်ခဲ့သမျှနှင့်သင့်အတွက်လုပ်ခဲ့သမျှအရာအားလုံးအတွက်သင့်အားဂုဏ်ယူကြောင်းသင်ပြသရန်မည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆိုသင်ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
မာနထောင်လွှားခြင်း၊ နာကြည်းခြင်းသို့မဟုတ်အခြားအဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့်အကြောင်းရင်းများကသင်၏ဆက်ဆံရေးကိုယိုယွင်းစေမသွားပါစေနှင့်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီမေးခွန်းမေးကြည့်ပါ - မင်းမနက်ဖြန်သေရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒေါသထွက်သင့်သလား။ မဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ဤအကြောင်းကြောင့်သင့်ဖခင်နှင့်သင်၏ဆက်ဆံရေးကိုဂရုစိုက်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်သည်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆက်ဆံရေးကိုသင်ဂရုစိုက်ရန်အရေးကြီးသည်။ ဖခင်များနေ့ကိုကျင်းပရန်နေ့တစ်နေ့ဖြစ်သော်လည်းဖခင်တစ် ဦး သည်နှစ်စဉ်နေ့တိုင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သင့်ဘ ၀ ရဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဂရုစိုက်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။
ထို့ကြောင့်အချိန်ပိုမဖြုန်းပါနှင့်၊ သင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်ပေးထားသောစာပိုဒ်တိုများအားလုံးကိုဖတ်ပါ။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောအရာများကိုရွေးချယ်ပြီးသင်၏အဘအားသင်မည်သို့အပ်နှံမည်ကိုစဉ်းစားပါ။ သင်သူ့ကိုသင်အပ်နှံနေသည့်လှပ။ စိတ်ရင်းမှန်သောစကားများကိုသူမြင်သည်နှင့်သူ၏မျက်စိသည်ရွှင်လန်းမှုနှင့်ပြည့်နေလိမ့်မည်ကိုသင်မြင်လိမ့်မည်။
မင်္ဂလာရှိသောဖေဖေ။ ဘာလဲသိလား? မင်းကငါ့အဖေဖြစ်ဖို့ကံကောင်းတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ... ငါကဲ့သို့သောမင်းကိုဘယ်သူမှမချစ်ဘူး။
လူတစ် ဦး သည်ဖခင်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသတိပြုမိချိန်တွင်သူ့တွင်သားတစ်ယောက်ရှိပြီးဖခင်ကမှားသည်ဟုယူမှတ်သည်။
ဘ ၀ သည်ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲဖြင့်လာခြင်းမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အံ့ဖွယ်ဖခင်နှင့်အတူကျွန်ုပ်လာပါမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဖခင်တစ် ဦး သည်မိမိကလေးများအားသူလိုချင်သလိုကောင်းသောဖြစ်ရန်မျှော်လင့်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။
အဖ၊ ကျွန်ုပ်ဘဝ၏အကောင်းဆုံးအချိန်များကိုကျွန်ုပ်နှင့်အတူဝေမျှပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်းဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးဖခင်တစ်ယောက်ပါ။ ငါမင်းကိုပပချစ်တယ် ပျော်ရွှင်စရာအဖေများနေ့ပါ!
မင်းကငါ့ကိုစက်ဘီးစီးဖို့သင်ပေးတယ်၊ အိမ်စာလုပ်တယ်၊ မင်းဒဏ်ရာတွေကိုကုသပေးတယ်၊ မင်းလည်းကားခတွေမပေးချင်ဘူးလားဟုတ်တယ်မဟုတ်လား? ငါ့ကိုမင်းရဲ့ခြွင်းချက်မရှိတဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဆက်ပေးဖို့မင်းအတွက်အခုငါနေတော့မယ်။ ဂုဏ်ယူပါတယ်အဖေ!
ဖခင်တစ် ဦး သည်ဘဝကိုပေးသောသူမဟုတ်၊ ၎င်းသည်အလွန်လွယ်ကူပြီးဖခင်တစ် ဦး သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေးသူဖြစ်သည်။
မွေးကင်းစကလေးငယ်သည်သူ၏ဖခင်၏လက်ချောင်းကိုပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လက်သီးဖြင့်ညှစ်လိုက်သောအခါ၎င်းသည်သူအမြဲတမ်းပိတ်မိနေသည်။
ဖခင်ကောင်းတစ် ဦး သည်ဆရာ ၁၀၀ ရှိသောကျောင်းထက် ပို၍ ထိုက်သည်။
သူရဲကောင်းအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရသူသည်သူတစ်ပါးကိုကာကွယ်ရန်နှင့်သူတစ်ပါးအကျိုးဆောင်ရန်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုတမင်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူမထူးခြား။ ရက်ရက်ရောရောရဲစွမ်းသတ္တိတင်ပြသူဖြစ်သည်ဟုဆိုထားသည်။ ဒီနေ့လိုနေ့မျိုးမှာမင်းကိုပြောစရာရှိလို့အဖေ - ငါ့ရဲ့နေ့သူရဲကောင်းဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါမွေးဖွားလာတုန်းကမင်းကပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပြုံးပြီး၊ ငါလက်ထပ်တုန်းကမင်းကဝမ်းနည်းပူဆွေးငိုကြွေးခဲ့တယ်။ အခုငါမင်းကိုကိုယ့်ဘဝထက်ပိုပြီးချစ်တယ်လို့ပြောချင်တယ်။
ဖခင်တစ် ဦး ဖြစ်ရန်အမြဲမလွယ်ကူသည်ကိုကျွန်ုပ်သိပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားအလုပ်များစွာပေးအပ်ခဲ့သည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏ကျဆုံးခြင်းအားလုံးတွင်သင်၏လက်များထရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်းရှိနေခြင်းကငါ့ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိစေတယ်။ ယနေ့ငါနှင့်ငါ့အသက်တာ၏နေ့စဉ်နေ့တိုင်းငါ့အနားမှာဖြစ်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်စရာအဖေများနေ့ပါ!
ဖခင်တစ် ဦး သည်ဂုဏ်ယူရမည့်သူ၊ ကျေးဇူးတင်ရန်ပြောသူတစ် ဦး၊ ချစ်ခင်ရသူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်စရာအဖေများနေ့ပါ!
ဖခင်တစ် ဦး ၏သားသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံးအမွေမှာတစ်နေ့တာ၏အချိန်အနည်းငယ်သာဖြစ်သည်။
ဖခင်တစ် ဦး ဖြစ်ခြင်းသည်အမြစ်တွယ်။ အမြစ်တွယ်နေခြင်းကြောင့်ဘဝကိုရဲစွမ်းသတ္တိနှင့်သန္နိdetermination္ဌာန်ချထားသည်။ ပျော်ရွှင်စရာအဖေများနေ့ပါ။
ဖခင်တစ် ဦး သည်မိမိသားကိုစွန့်ခွာနိုင်သည့်အလှပဆုံးနှင့်အံ့အားသင့်ဖွယ်အမွေမှာဇာတ်ကောင်များဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်လိုက်နာရန်ခြေလှမ်းများကိုပြခြင်းဖြစ်သည်။ ပျော်ရွှင်စရာအဖေများနေ့ပါ!
အဖေ, သင်ခဲ့ကြသည်, ဖြစ်ကြပြီးအစဉ်မပြတ်ငါချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းသားဖြစ်လိမ့်မည် ပျော်ရွှင်သောနေ့!
မိဘတစ် ဦး ဆိုတာသင်အော်ငိုတဲ့အခါသင့်ကိုကူညီပေးတဲ့သူ၊ သင်စည်းကမ်းတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့အခါသင့်ကိုဆူညံသူ၊ သင်အောင်မြင်တဲ့အချိန်မှာဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားစွာသင်မယုံကြည်သည့်တိုင်သင့်ကိုယုံကြည်သူတစ် ဦး ဖြစ်တယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » ခမည်းတော်၏နေ့အတွက် 25 စာပိုဒ်တိုများ